Flickr Uploadr Inochengetedza Zuva! | Martech Zone
Svondo, June 3, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndanga ndiri mushandisi ane mwero we Flickr uye chaizvo handina kuita zvakawanda nazvo. Chikonzero changu chikuru chekushandisa Flickr chaive chikamu cheboka chakanditendera kuti ndiite iyo I Sarudza Indy Boka webhusaiti Ini Sarudza Indy. Kujoinha Mapoka chinhu chakakosha chechero webhusaiti yemagariro uye vese vanoita kunge vari kubata nekuvapa.
My mwanakomana akapedza kudzidza kuChikoro chepamusoro vhiki rapfuura (aine inoremekedzwa 3.81 GPA, diki kudzidza, uye akagamuchirwa muchirongwa cheFizikiki pa IUPUI). Ndakatora mafoto mashoma pa graduation, ndikaasungira zip ndokuatumira kuhama dzedu dzese. Pakarepo, ndakatanga kuve nematambudziko… vamwe vanhu vakatora iyo faira vakatadza kurivhura, kune vamwe rakaora, uye vamwe havana kumborigamuchira zvachose.
Mangwanani ano ndafunga kuisa mifananidzo kuFlickr uye ndigovane seti iyi nemhuri yangu. Ini ndanga ndichinyatso kutya maitiro, asi… upload, edit, upload, edit, upload, edit. Ndisati ndatanga, ndakashanyira iyo Zvishandiso chikamu cheFlickr kuona izvo zvingave zvachinja uye ini ndawana iyo Flickr Uploadr:
Yakashanda zvinoshamisa! Chichemo changu chete ndechekuti haina kuratidza mifananidzo iri muchishandiswa ine maitiro akakodzera (iwo akaiswa neakarurama maitiro, zvakadaro) saka ndakapedza imwe nguva kuyedza kuona kuti chii chaiitika. Kamwe mifananidzo yacho payakadzvitswa, ndakagadzira seti, ndikaigovana nemhuri yangu neshamwari (unogona kutumira email kusvika kushamwari makumi mashanu uye mhuri mune imwechete pfuti)!
Kunaka kupora. Ndatenda, Flickr! Ndinovimba kuona dzimwe nzira dzekunyatsoratidza mifananidzo mune ramangwana. Pave nemwedzi kubva pandakapinda muFlickr uye hazviite sekunge paine mamwe maturusi ekuti uratidze mifananidzo yako mudivi repadivi, faira rekupenya, slideshow, nezvimwe.
maonero Kupedza kwaBill Mifananidzo
PHP: ZvakarerukaXML Yakatakurwa?
Jun 3, 2007 pa 12: 22 PM
Ini ndakakwanisa kufambisa ingangoita shamwari dzangu dzese pamusoro pekushandisa Flickr sezvo wese munhu anoishandisa anoona iyo interface irinyore kushandisa. Imba yangu yekuishandisa inoenderana neMacbook yangu nePhoto, kunyangwe paine chishandiso chakasiyana icho Flickr yaunopa mahara haina kubatana nePhoto. Kweanenge madhora gumi (ndinofunga) ndakatenga 'FlickrExport' inosanganisirwa muPhoto uye inoita kurodha + tagging uye absolute doddle.
Kuti ndiwane kushandisa chinhu chakadai seFlickr chinofanira kuve chakareruka zvikasadaro ini ndinongotadza kunetsekana, sezvo ini ndanga ndato fanirwa kupfuura neyakaitika yose yekubaya kamera yangu uye kuitora kufambisa mifananidzo.
Kuburitswa kukuru kwave kuri yangu Nokia N95 - pakarepo kupfura + kurodha. Mepfuti yakawanda pane yangu blog ikozvino yatorwa nayo 5MP yakawanda uye kunyangwe isingaenzanise nekamera yakakodzera iyo yakaringana kune blog mifananidzo.
Saka saka tinouya kuZooomr, sechokwadi vamwe vazhinji isu tanga takamirira kuti tione kuti chinhu ichi chinopera sei. Ini ndakakwanisa kupinda mangwanani ano asi ndawana kuisa mifananidzo ichirwadza mukunyanyisa, ndingafarire kutengesa mamwe mapfuti angu ari nani, asi marwadzo / mafaro chiyero hachina kunaka izvozvi.
Jun 3, 2007 pa 12: 30 PM
Ini ndanga ndiri wekutanga kutora Flickr uye ine chokwadi chakura mumakore mashoma apfuura… uye kufunga kuti zvaizove chikamu chevhidhiyo mutambo interface uye ikozvino mhinduro yemufananidzo.
Shamwari yakanaka neni tiri kushanda paWordPress photo gallery plugin solution iyo inotora yakanakisa kune akawanda asiri ekunze mapurogiramu epikicha, seFlickr asi ichiita kuti zvese zvako mapikicha, kuratidza, nezvimwe zvinodzorwa zvakazara kubva kune yako WordPress yekuisa. Hapana chikonzero chekupindura pane chechitatu bato zvinhu.
Tine humbowo hunoshanda hwepfungwa uye mumazuva mashoma anotevera ichave yakagadzirira kuburitswa 1.0.
Ini ndichave nechokwadi chekutumira nenzira yako kuti iwe ugone kuibaya pairi 🙂
Tinokukwazisai kunaBill nekupfuura neChikoro chepamusoro uye neiyo steller GPA.
Chinhu chimwe chete chinoshaikwa kubva kumifananidzo yako mufananidzo wako nemwanakomana wako… zvamira sei? hehe… Lets see the proud baba proud
Jun 3, 2007 pa 1: 26 PM
Kutarisira kuona izvo, Sean. Handikwanise kutenda kuti wakarasikirwa mufananidzo mukuru wangu nemwanakomana wangu nemwanasikana - iri imomo!
Jun 3, 2007 pa 1: 32 PM
Ini ndinogona kunge ndine humbowo hwepfungwa pane yangu saiti gare gare nhasi uye ini ndinokutumirawo email.
Wow. Ndakarasikirwa sei nemufananidzo iwoyo wako nemhuri yako? Tarisa iwe, vese vanozvikudza uye zvinhu.
Jun 4, 2007 pa7: 32AM
Nemwoyo wese Makorokoto kuna Bill uye kwauri zvakare.
Wakamboedza here? http://beta.zooomr.com/?
Zvakare kana iwe uchimboda kurodha ako ese mapikicha kubva kuFlickr, chengeta izvi zvinobatsira ->
Ndatenda Doug nerubatsiro rwako nezvose wordpress 🙂 Wakandiburitsa muto rimwe zuva 🙂